DEG DEG:- Banaanbax balaaran oo maanta ka dhici doono magaalada Muqdisho (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Banaanbax balaaran oo maanta ka dhici doono magaalada Muqdisho (DHAGEYSO)
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka dhaco banaanbax looga soo horjeedo afgambigii dhicisoobay ee lala damacsanaa in taladda dalka Turkiga lagula wareego.
Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maanta magaalada Muqdisho uu ka dhici doono banaanbax balaaran oo lagu taageeraayo dowladda Turkiga islamarkaana looga soo horjeedo afgambigii dhicisoobay.
Waxaa banaanbaxaan kasoo qeyb gali doono dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ka kala imaanaysa 17-ka degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir, waxaana ay dadkaasi muujin doonaan sida ay kaga xun yihiin afgambiga dhicisoobay ee lala damacsanaa dowladda Turkiga.
C/fitaax Cumar Xalane oo ah Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin shacabka Turkiga, islamarkaana ay dareenkooda ku muujin doonaan banaanbaxa maanta dhici doona.
Dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa si gaar ah waxay saameyn ugu leedahay dalka Soomaaliya, maadaama door muuqato ay ku leeyihiin arrimaha ku aadan taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inuu banaanbaxaan maanta ka dhaco qeybaha kala duwan ee magalaada Muqdisho, waxaana sida la sheegay banaanbaxaasi kasoo qeyb gali doono xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.